Gobolka Gelderland Weed? Fursadaasi Way Sii Yartahay • Dawooyinka Inc.eu
Gelderland weed gobolka? Fursadaasi waa sii yaraaneysaa
Gelderland waa inay noqotaa gobolka xashiishka ee Nederland. Xubinta Dutch D66 xubin ka ah baarlamaanka Antoon Kanis ayaa ku dooday tan sanad ka hor markii ay cadaatay in tijaabo lagu qaadi doono xashiishka sharciga ah.
2 Isku qaboojin
3 Cuncun gacmeed
Fursada ay riyadu ku iman karto run ahaantii waa sii yaraaneysaa. Halka degmooyinka degmooyinka kala duwan ee Gelderland ay markii hore ku qanacsan yihiin maxkamadaynta, xoojintaas ayaa hoos u dhacaysa.
Achterhoek, saddexda degmo ayaa waxay rabeen in ay noqdaan goob tijaabo ah oo ay la wadaagaan dukaanka kafeega (Doetinchem, Winterswijk, Oude IJsselstreek). Dadku hadda way ka roonaanayaan, gaar ahaan tan iyo markii loo iibin waayay Jarmalka ee maxkamadaynta.
"Waxaa laga yaabaa in tani ay ka hortageyso dalxiiska daroogada, laakiin taasi uma shaqeynayso Achterhoek", ayuu yiri Mark Boumans, duqa magaalada Doetinchem. “Achterhoek, makhaayadaha kafeega waxaa ku yaal macaamiil badan oo Jarmal ah. Haddii aan hadda loo oggolaan inay ka iibiso booqdayaasha Jarmalka, waxaan ka caawin doonnaa ganacsiga inuu u wareego waddada. ”
Boumans ma rabaan inay kormeeraan xanaanooyinka xashiishadda ama rarka cowska: "Lacag uma qoondeyn doonno ilaalinta dukaamada kafeega."
Dacwaddan ayaa sidoo kale ah dareenka ugu weyn ee laga qabo badhasaabka Arnhem Axmed Marcouch. Wuxu qabaa, in aanay jirin sabab loo soo sheego wargayska Arnhem, laakiin wuxu rumaysan yahay, inay waajib tahay, in la hubiyo, in beeraha kalluunku ku badbaadaan, iyo in dembiilayaashu meel fog ku hayaan.
Wuxu qabaa, inay tahay in golaha wasiirradu arrintani si habboon u soo agaasimaan, haddii loo baahdana la geeyo booliis awood dheeri ah Beerista hemp waa aagga dambiyada abaabulan, waa inaan ka feejignaano taas.
Marcouch ma rajeyneeyso wax dhibaato ah oo ka dhaca Arnhem iyadoo laga mamnuucayo iibinta dadka ka baxsan degmada. Arnhem, iibka badanaa waxaa laga sameeyaa dadka deegaanka. Waxa dhici kara ayaa ah in dadka loo diiday meelo kale ay ka warbixin doonaan Arnhem. Waa inaan ka warqabnaa taas. ”
Marcouch ayaa ku adkeyd in dawladdu horay u sheegtay in tijaabadu ay sii socon doonto afar sano oo markaas waa in la joojiyaa. Wuxuu ogaaday muddadaas aad u gaaban oo uu doonayo inuu wadashaqeyn kala yeesho degmooyinka kale ee soo jeedinta xukuumadda. Waxa uu sidoo kale ugu baaqayaa xildhibaannada iyo mulkiilayaasha dukaanka kafeega inay codkooda maqlaan, sidaa darteed goluhu wuxuu xoojiyaa soo jeedinta.
Xiisihii ayaa hoos u dhacay Nijmegen. Xubnaha golaha deegaanka oo markii hore aad u xamaasad badnaa ayaa hada aad loo ilaaliyay. Gaar ahaan 'shuruudaha degganeyaasha', oo qeexaya in iibka loo samayn karo oo keliya mulkiileyaasha, wuxuu la kulmaa iska caabin. Haddii cabirkaasi sidiisii ​​ahaado, macno yar bey u tahay Nijmegen inuu ka qeyb galo, ayay leeyihiin xubnaha golaha. Duqa magaalada Hubert Bruls wuxuu rabaa inuu sugo oo uu arko waxa ay golaha wasiirada aakhirka la imaan doonaan.
Xamaasad xoogaa way ku qaboojisay hoolka magaalada ee Wageningen. Laakiin Wageningen wali ma dhihin maya tijaabada haramaha, ayuu yiri afhayeen. Kaliya markaan darsay qorshooyinka saxda ah iyo sharciyada dheeriga ah Wageningen ayaa si rasmi ah u saxiixi doonta maxkamadeynta qeybta hore ee sanadka 2019 ama maya. "
Xubinta D66 States Kanis wali kamuu bixin riyadiisii ​​ahayd inuu Gelderland ka dhigo gobol gocasho ah. "Dhinaca beerashada, waxaan ku leenahay xarunta aqoonta aqalkeena oo aan la leenahay Jaamacadda Wageningen."
Kanis wuu ku raacsan yahay dhaleeceynta. “Afar sano waa wax aad u yar. Ganacsade keebaa doonaya inuu maalgashado kobcinta xashiishadda haddii uu khatar ugu jiro in mashruucu markale istaago afar sano gudahood? Waa in boos lagaa siiyo tijaabada tan oo kale ah. ”
Nasiib wanaagse Kanis, weli farxad ayaa ka jirta jaamacadda Wageningen. Eric Poot oo ka tirsan Jaamacadda Wageningen & Cilmi baaris ayaa horay u sheegay in gacmihiisu cuncun yihiin si loo bilaabo tijaabada haramaha. Cilmi baaris ku saabsan haramaha dawada ayaa horay loogu sameeyay Wageningen jaamacaduna waxay jeceshahay inay door ka ciyaarto tijaabada.
Akhri qodobada oo dhan gelderlander.nl (Xigasho)
cannabissharci ahaansharci-dejintabaaritaanka weed
Ma jirin biirka caddaanka ah, laakiin beedka
27-ka Janaayo waa maalinta: khamriga ugu horreeya ee xashiishka laga dhadhaminayo Nederland. Dhadhaminta qolka De Schans ee Uithoorn ayaa ...
Ivo J. wuxuu daaha ka qaadaa waxqabadyada kooxaha gaangiska daroogada laakiin OM ayaa beenisay heshiis
Shay ka soo baxay EenVandaag ayaa muujinaya in Waaxda Caddaaladda laga yaabo inay haysay macluumaad muhiim ah kiis dambiyeed ...
Si kor loogu qaado barnaamijka cuntada, Jaamacadda New Jersey waxay doonaysaa inay wax karsato xashiishad
Kuleejka bulshada ee bilaabay barnaamij farshaxanka cunnada 1981 si loogu tababaro kuugga ...